ရောင်းရန်အလျားလိုက်တိရိစ္ဆာန်အစာရောနှောခြင်း,တောင်အာဖရိကမှ grinder တင်ပို့
Big Feed တောင့်စက်
မေလဒီလ၌, ကျွန်ုပ်တို့သည်အလျားလိုက်အစာရောနှောစက်စက်နှင့်သေးငယ်သောအစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတစ်ခုဖွင့်နိုင်သောအတောင့်ကြိတ်စက်အားဖြင့်တောင်အာဖရိကသို့အလျားလိုက်အစာရောနှောသည့်စက်နှင့်အစာကြိတ်ခွဲစက်များကိုတင်ပို့ရောင်းချပါသည်။, ကကြက်ဘဲအစာတောင့်ကို process နိုင်ပါတယ်,ကျွဲနွားကျွေးသည်,ကြက်စာ,ဝက်အစာကျွေးခြင်း etc.this ဤအမျိုးအစားတိရိစ္ဆာန်အစာရောနှောခြင်းသည်ဖဲကြိုးနှင့်အလျားလိုက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်,ဒေါင်လိုက် feed mixer ထက်ပိုမိုတိကျသောရောစပ်မှုအချိုးအစားရှိသည်.
မေလဒီလ၌, ကျနော်တို့အလျားလိုက် feed ကိုရောနှောစက်တင်ပို့ခြင်းနှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ အစာကြိတ်ခွဲ တောင်အာဖရိကမှဝက်အံကူးစက်နှင့် တောင့်စက်ကိုအစာကျွေး အရာသေးငယ်တဲ့အစာကျွေးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတက်စေနိုင်သည်, ကကြက်ဘဲအစာတောင့်ကို process နိုင်ပါတယ်,ကျွဲနွားကျွေးသည်,ကြက်စာ,ဝက်အစာကျွေးခြင်း etc.this ဤအမျိုးအစားတိရိစ္ဆာန်အစာရောနှောခြင်းသည်ဖဲကြိုးနှင့်အလျားလိုက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်,ဒေါင်လိုက် feed mixer ထက်ပိုမိုတိကျသောရောစပ်မှုအချိုးအစားရှိသည်.
single-shaft အမွှာဝက်အူမွေးမြူရေးအစာရောနှောခြင်းသည်အလျားလိုက်နှင့်အသုတ်ဖြစ်သည်, အထူး rotor ညွှန်ကြားချက်များနှင့်မြင့်မားသောရောစပ်ဒီဂရီရှိသည်. ရဟတ်နှင့်အဓိကကိုယ်ထည်အကြားကွဲလွဲမှုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်. အောက်ခြေမှာတံခါးကျယ်ကျယ်ဒါမှမဟုတ်တံခါးဖွင့်ထားတယ်, လောင်းများအတွက်ပစ္စည်းများအဆင်ပြေပါစေ. စက်၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်ထပ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ပစ္စည်းများစွန့်ပစ်ရန်ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ပေါက်ကိုအဆိုးရွားဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည် (ထို့အပြင် dynamoelectric သို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ် ), လုပ်ဆောင်ချက်အားပိုမိုတိကျမှန်ကန်စေရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ. ဖြည့်စွက်ကာ,ရေနံပိုက်စက်အတွင်း၌တပ်ဆင်ထားသည်,မြေတပြင်လုံးဖွဲ့စည်းပုံကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှိပါတယ်,လှပတဲ့ပုံ,နှင့်စက်လည်ပတ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏မျက်နှာသာ၌တည်၏.
ဒီအမျိုးအစားအစာကျွေး grinder လျှောက်လွှာ
တိရိစ္ဆာန်အစာကြိတ်စက်ကိုလယ်ယာ၌ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, အလယ်အလတ်စားကျက်စားစက်ရုံသို့မဟုတ်မိသားစုအသုံးပြုရန်. ဤအစာကျွေးခြင်း grinder အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမှုန်လျှော့ချရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်:
♦ စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းများ, ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းဖူးအဖြစ်, ပြောင်း, ပြောင်းဖူးအညှာ, မြေပဲခွံ, မြက်ခြောက်, ဝါဂွမ်း, စသည်တို့.
♦ ဆေးဝါးနှင့်စက်မှုပစ္စည်းများ, ထိုကဲ့သို့သောတရုတ်ဆေးဝါးကောက်ပဲသီးနှံများအဖြစ်, လင်းကျောက်, ကျောက်မီးသွေး, ကျောက်မီးသွေးအကြွင်းအကျန်, တောအုပ်, စသည်တို့.
ဒီအမျိုးအစားအစာကျွေး grinder features တွေ
●လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်, အနိမ့်တိကျတဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု, တိကျမှန်ကန်ပြီးတသမတ်တည်းထုတ်ကုန်ကြိတ်
●ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်း: နောက်ဆုံးအရွယ်အစားပစ္စည်းများကိုညာဘက်မျက်နှာပြင်ဆန်ခါဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်. ထို့အပြင်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း, နှင့် variable ကိုမြန်နှုန်းအကြိမ်ရေ drive ကိုထိန်းချုပ်မှု၏ထို option, ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုး processing မှ crusher ကို enable.
●အဓိကအစိတ်အပိုင်းတူများကိုအဆင့်မြင့်ကာဗွန်အလွိုင်းသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်, အရာအကြမ်းခံနှင့် wear- ခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ရှည်လျားသောသက်တမ်းနှင့်ကြာရှည်ခံမှု.
စုံစမ်းရေးပုံစံ ( မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ပြန်လာပါမည် )
ဖြည့်စွက်သည်:Wenhua လမ်း Sanquan
Zhengzhou China လမ်းမ
ဖြည့်စွက်သည်:Wenhua လမ်း Sanquan လမ်း Zhengzhou တရုတ်
သင့်ဘာသာစကားရွေးပါ EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာNederlandsFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीBahasa Indonesia日本語한국어PortuguêsРусскийEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng Việt
ဗစ်တာ Pellet စက်© 2012-2021 အားလုံးညာဘက်သိုက်.